राम्रो विचार ल्याउनु पर्दछ ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
राम्रो विचार ल्याउनु पर्दछ !
२०७६ असोज २३ गते बिहिवार
विश्वभरी अध्यात्मिकवादलाई मान्ने धेरै छन् । प्रत्येक धर्मको आफ्नो एक अलग्गै पहिचान छ । जस्तै हिन्दु, मुस्लिम, इसाई, बौद्ध अनि यहुदी लगायतका ईत्यादी । मुस्लिम धर्मले आफ्नो अल्लाह (रसुल) को इबादत गर्छन् अनि एक अर्कालाई समान भावनाले हेर्छन् । उहाँहरुमा जेठा, कान्छा जात भएता पनि विभेद छैन । शिया र सुन्नी दुईवटा समुदाय छन् । फरक मत छ तर विभेद भने छैन । ईस्लाम धर्मको अनुसार ब्रह्माण्डको पहिलो मनुष्य भनेका आदम अनि हव्वा हुन्न । भन्नाको अर्थ शिया अनि सुन्नी वा सबै मुस्लिम आदम अनि हव्वाका संतान । एक धर्म ग्रंथ कुरान । इसाई धर्म लगभग ईस्लाम धर्मबाट केही कुरामा मेलखान्छ । इसाई धर्म चार कित्तामा विभाजित छ ।
केथोलिक, प्रोटैस्टेंट, ओर्थोडोक्स, एवानजिलक आदि । पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्माको एवटा भौतिकस्वरुप प्रभु येशु मसीह को इबादत गर्छन् । केही किसिमको उच्च नीच छैन । विभेद छैन । सबै समुदाय एक मालाको मोती । सबै ईस्टरको प्रार्थना गिरिजाघरमा संगै गर्छन् । इस्लामले जुम्माको नमाज सामुहिकरुपमा गरेजस्तो । वहाँहरु चाहिँ ब्रह्माण्डको पहिलो मनुष्य एडम अनि इवको संतान हुन्न बाईबलको धार्मिक मान्यता अनुसार । सनातनी धर्म हिन्दु विचारमा चार वेद, चार धाम, चार जातीको कुरा गर्छन् । प्रत्येक धर्म ग्रंथले अर्को ग्रंथको कुरा काटेर आधार बनाएको पाइन्छ । त्यसैमा उपनिषद् ? हरेक देवि देवताको नाममा उपनिषद् । ठाउँ अनुसार देवि देवताको महिमा मन्डीत गर्छन । कांशी जाओ शिवजी । मथुरा जाओ कृष्णजी । अयोध्या जाओ रामजी । अरे ! बाबा ईश्वर हुन्न सर्वव्यापी छन् । तिमिले बांटनु पर्दैन ।
जब भगवान बाँटी सक्छौ, भने इन्सानको के औकात । यति विभेद, यति अत्याचार, यति शोषण हुदाहुदै हामी पर्खिएर हेर्दै बसेका छौं । मन्दिर प्रवेश नगर्नु पाइने । राम्रो शिक्षा, सुस्वास्थ्य नपाउने । शुद्रले बनाएको देवि देवताको मुर्ती शुद्रले पुज्न नपाउने । अब अस्पताल अनि स्कुल अलग्गै गर्ने छन् कि ? अध्यात्मिक कुनै नराम्रो होइन यदि उसमा विभेद छैन भने । अध्यात्मिक अनि भौतिकवाद राजनैतिक सिक्काको दुई अलग अलग पहलु हुन्न । धर्मको कुरा गर्ने हो भने सनातनी हिन्दु हामी प्रजापती ब्रह्माका पहिलो मनुष्य पुत्र मनु अनि शतरुपाका संतान हौं, भनेको अर्थ हामी एकै आमाबाबुका संतान ? फेरि कसरी बाहुन उच्च जाती अनि शुद्र अछुतो हुनुसक्छ ? बाहुन जेठा छोरा हुनुसक्छन । शुद्र (दलित) कान्छा छोरा हुनुसक्छ । तर हुन दुमै दाई भाई । सबै धर्मको एक सार छ भने विवाद कस्तो ? विभेद कस्तो ? नराम्रो विचार मार्नु पर्दछ । राम्रो विचार संसारमा ल्याउनु पर्दछ ।